Amanqaku eUgjesa Djuric kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Ugljesa Djuric
NgoMvulo, Julayi 20, 2020 NgoMvulo, Julayi 20, 2020 Ugljesa Djuric
Ukuba uqhuba ishishini, uyazi ukuba ukutyhila iindlela ezintsha nezisebenzayo zokuphucula amaqondo okuguqula ngomnye wemisebenzi ebaluleke kakhulu. Mhlawumbi awuyiboni ngale ndlela ekuqaleni, kodwa ukuphuma kweenjongo-pop-ups kunokuba sisisombululo ngqo osikhangelayo. Kutheni le nto kunjalo kunye nendlela ekufuneka uzisebenzise ngayo kwangaphambili, uya kufumanisa ngomzuzwana. Zithini iiPop-up zeNjongo yokuPhuma? Zininzi iintlobo ezahlukeneyo